China 2020 mveliso zasebusika abadala inkampu idada / irhanisi phantsi ibhedi ukulala mveliso kwiifektri kunye nabenzi | Xueruisha
Le ngxowa ilala phantsi yenziwe nge-20D 400T engenawo moya, engenawo manzi kunye neenyembezi zenylon enganyangekiyo. Ingabugcina ngokufanelekileyo ubushushu, inciphise ukusasazeka kobushushu, ithintele umoya obandayo ukuba ungangeni, kwaye inesakhono esithile sokulwa neentsholongwane, isenza ukuba isempilweni ngakumbi kwaye isempilweni ukuba isetyenziswe yonke imihla. Izinto zokugcwalisa ngama-90% wedada emhlophe ekumgangatho ophezulu ezantsi, eneFill Power ye-650+ kunye nobunzima bokugcwalisa obungama-600g, obunokunika ukufudumala okuphezulu kunye nokukhuselwa kubanda ngaphandle kokunyusa ubunzima, ukucacisa umbono womsebenzisi wobudlelwane phakathi kokugcwalisa ubunzima kunye nobushushu. Okona kubaluleke kakhulu, olu hlobo lwedada phantsi lunokuchasana namanzi okuhle kakhulu, kwaye lunezinga eliphezulu lokungunda, elinokuhlala lomelele kugcino lobushushu. Le bhegi yokulala yenye yezona zinto zithengiswa kakhulu ngaphandle kwimarike, kwaye ikwaluhlobo oludumileyo ngesimo sikaMama. Ulwakhiwo lwangaphakathi lwale ngxowa yokulala luyilwe ngokukodwa sithi. Njengokuba sisebenzisa i-3D (emithathu-dimensional) ethe nkqo kunye nebhokisi yeenyawo, enokuthi ikuthintele ngokufanelekileyo ukungalingani phantsi komjelo ngamnye ezantsi emva kokuba ibhegi yokulala isetyenziselwe ixesha eliza kuchaphazela ukugcinwa kobushushu. Ubude obugcweleyo bokujija umoya bunokuthintela ubungakanani bokuvuza kobushushu nge-zipper. Uyilo lwekhola lentamo luyakuvumela ukuba ulale kamnandi ngaphandle kokukhathazeka ngokuphulukana nobushushu kumqolo wakho wentamo. Ngaphandle kwe-hood ejiyileyo yenziwe ngo-U ngentuthuzelo kunye nokushushubeza, intambo yeHood shrink, iFlap Velcro kunye nolunye uyilo olucokisekileyo konke kukufudumala okusengxoweni yokulala. Nokuba ungaya phi, kwaye nokuba wenza ntoni, siyathemba ukuba le ngxowa yokulala yenzelwe wena ngokukhethekileyo. Ucinga ntoni? Okanye ukhathazwe yintoni? Ukuba unawo nawaphi na amathandabuzo, nceda ungathandabuzi ukusazisa. Abasebenzi bethu abaqeqeshiweyo baya kusombulula ingxaki yakho kwaye benze isisombululo kuwe ngokukhawuleza.
Khetha ukufudumala kwebhegi yokulala (intuthuzelo)
1. Qikelela amaqondo obushushu oza kumisa kuwo. Nangona eli nani lihluka ngokwamaxesha onyaka kunye nemozulu, kwiimeko ezininzi, iimeko zokulala zabantu abathanda ukuhamba ziphakathi kuka-7℃ nangaphezulu ko-zero 7 ℃.
2. Lungisa amaqondo obushushu angentla ngokokukhetha kwakho kunye nemeko ethile onokuthi ujongane nayo.
3. Ngokwamaxabiso obushushu ahlengahlengisiweyo, bhekisa kubushushu (intuthuzelo) ebonelelwe ngumenzi ukukhetha ibhegi yokulala. Kufuneka kuqatshelwe ukuba njengoko imigangatho yabavelisi abohlukeneyo ingalinganiyo, amaxabiso anikezelwe ngabavelisi sisalathiso kuphela, awasebenzi kwaphela nakweyiphi na imeko.
Egqithileyo I-2019 entsha yokuyila umenzi ukukhanya okunethezeka okunokupakishwa kwedada phantsi kwengxowa yokulala
Okulandelayo: Umenzi we-2020 ophakamileyo wama-90% ezele iibhedi zokulala ezinamaxabiso aphantsi